Dhijitari Nomads Kugamuchirwa muMalta kweKwakawedzerwa Kugara New Residence Mvumo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Malta Kuputsa Nhau » Dhijitari Nomads Kugamuchirwa muMalta kweKwakawedzerwa Kugara New Residence Mvumo
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Malta Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Mufananidzo nerubatsiro rweMTA / Residency Malta
Malta, nzvimbo yezvitsuwa muMediterranean, ikozvino iri kugamuchira vatambi vedigital kubva kune asiri maEuropean nyika neNewadad Resit Permit ichangobva kuvhurwa inotarisirwa kupa nyika yechitatu nyika, kusanganisira kubva kuUS neCanada, mukana wekushanda kure kubva kuMalta kwenguva pfupi. . Iyi danho ichave yakavhurika kune COVID-19 vachengeti vanyoreri chete.
Iyi mvumo nyowani inoitirwa kusvika niches nyowani kupfuura Europe, sezvo kufamba kwepasirese kuri kuramba kuchikwira nekuwana mukurumbira.
Vanhu vanogona kushanda vari kure vachishandisa tekinoroji uye vezvemabhizimusi vane hunyanzvi hwekufamba uye nekuwana nyika nyowani netsika vanogamuchirwa.
Vanhu vazhinji vane mabasa enguva dzose avo parizvino vari kushanda kubva kumba vari kutsvaga nzira dzekubatanidza iyi nzira nyowani yekushanda nepakati-petemu uye kufamba kwenguva refu.
Malta inotova nenzvimbo yakakosha yenhamba yedhijitari, kazhinji inoumbwa nevamiriri veEU vasingade chero mvumo nekuda kwekusununguka kwekufamba. Mvumo nyowani inoitirwa kusvika niches nyowani kupfuura Europe, sezvo kufamba kwepasirese kuri kuramba kuchikwira nekuwana mukurumbira, post-COVID.
"Malta yakasvetukira padanho rekuwedzera kudiwa kwekushandira kure pasi rose, sezvo denda rakachinjisa zvibodzwa uye maitiro matsva ari kuiswa," akadaro Charles Mizzi, Chief Executive Officer weResidency Malta, iyo hurumende inofambisa mvumo.
"Vanhu vanogona kushanda vari kure vachishandisa tekinoroji uye vezvemabhizimusi vane hunyanzvi hwekufamba nekutsvaga nyika nyowani netsika varikugamuchirwa," vakaenderera mberi VaMizzi. “Kana paine zvidzidzo zvadzidziswa kubva kudenda iri nderekuti vanhu vari kuda kufamba zvakanyanya kupfuura nakare kose. Malta inyika ine zvakawanda zvekupa - kubva pamamiriro ekunze anofadza uye mararamiro echitsuwa cheMediterranean, kune nhoroondo yayo yakapfuma uye nhaka, vanhu vanogamuchira vaenzi, yakanakisa Broadband zvivakwa uye mukana kune epasirese-epasi ekuchengetedza hutano mabasa. Chokwadi, vatenderi vanonzwa kugadzikana paminiti yavanogara pano. Uye nekunge chiRungu chiri mutauro wepamutemo uye mutauro wekuita bhizinesi, kutaurirana nevagari kunenge kuri basa riri nyore. ”
Ivo vanoshuvira kushanda kubva kuMalta, kwenguva pfupi inosvika pagore rimwe (rinowedzerwazve), vanofanirwa kubaiwa jekiseni, kuratidza kuti vanogona kushanda vari kure, vakazvimiririra nenzvimbo. Ivo vanofanirwa kuve vanoshandira mushandirwi akanyoreswa kunze kweMalta, kuita bhizinesi zviitiko zvekambani yakanyoreswa kunze kweMalta, uye kune avo vavanoshanda navo kana vagovani; kana kupa rakazvimirira kana rekubvunza masevhisi kune vatengi vane zvigaro zvechigarire zviri kune imwe nyika. Maitiro acho akananga-kumberi uye Residency Malta inovimbisa basa rinoshanda rinotarisirwa nemamisha anonzwisisa.
"Vanhu vari kufamba uye Malta iri kutora mari pane ino mamiriro epasi rose," akadaro Johann Buttigieg, Chief Executive Officer weMalta Tourism Authority. “Vanofamba nemadhijitari havasisiri musika wevashanyi. Vanhu vakawandisa vane mabasa enguva dzose avo varikushandira kubva kumba post-COVID vari kutsvaga nzira dzekubatanidza iyi nzira nyowani yekushanda nepakati-penguva uye kufamba kwenguva refu uye kuwanikwa kweimwe tsika. Isu tinotenda kuti iyi paradigm shanduko yekuenda kunoshanda kure yave pano kuti igare, saka hapana imwe nguva iri nani pane izvozvi yekukwezva vanamuzvinabhizimusi vanoshuva kutama kwenguva pfupi pamwe nedhijitari yekufamba-famba tsika mavulture ari kufamba pasirese. Malta inzvimbo yakanaka, yakachengeteka, inotaura Chirungu nyika, chiwi cheMediterranean. Chishandiso chete chinodiwa ilaptop yakanaka yekubatanidza kune nyika -pasirese yakasimba mabhendi mabhendi. ”
Uchapupu hweHIV: MaAmerican nemaCanada vanofanirwa kushandisa iyo Verifly app
VeriFLY inovandudzwa uye inochengetedzwa neiyo biometric yekusimbisa uye yekuzivikanwa vimbiso mhinduro mupi, Daon. VeriFLY inopa vafambi nzira yakachengeteka uye yakapusa yekusimbisa kwavanoenda COVID-19 zvinodiwa. Mushure mekugadzira chimiro chakachengetedzeka pane VeriFLY app, Daon anoongorora kuti data yemutengi inoenderana nezvinodiwa nenyika uye inoratidza yakapasa kana kutadza meseji. Iyi yakapusa meseji inojekesa cheki-mukati uye magwaro ekuongorora maitiro usati waenda. Iyo Anwendung zvakare inopa vafambi nezviyeuchidzo kana yavo yekufambisa hwindo iri kuuya kusvika kuvhara kana kana yavo gwaro rapera. Dzidza zvimwe nekushanya daon.com/verify.
Rumwe ruzivo nezve Malta's Nomad Residence Mvumo inogona kuwanikwa pa residencemalta.gov.mt/overview.
Zvitsuwa zvine zuva reMalta, pakati peGungwa reMediterranean, zvine musha wakasarudzika wenhaka yakasimba, kusanganisira huwandu hwakanyanya hweUNESCO World Heritage Sites mune chero nyika-nyika chero. Valletta, yakavakwa neanodada Knights yeSt.John, ndeimwe yenzvimbo dzeUNESCO uye European Capital of Culture yegore ra2018.Malta patrimony mumatombo ematombo kubva kune ekare-emahara emabwe ekuvakisa pasi rose, kune imwe yeBritish Empire's masisitimu anotyisa kwazvo anotyisa, uye anosanganisira musanganiswa wakapfuma wemapurani epamba, echitendero neechiuto kubva kunguva dzekare, medieval uye nguva dzekutanga dzazvino. Nemamiriro ekunze ane zuva rinotyisa, mahombekombe anoyevedza, hupenyu husiku hunobudirira uye makore zviuru zvinomwe zvenhoroondo inonakidza, pane zvakawanda zvekuona nekuita. visitmalta.com